दिल्लीमा परिक्षणका लागि पठाइएका सबै नमुना डेल्टा भेरियन्ट पुष्टि भएपछि मन्त्रालयले जारी गर्यो यस्तो विज्ञप्ती, मंगलवार कति थपिए नयाँ संक्रमित ? – Samriddhakhabar
July 28, 2021 खबर समृद्धLeaveaComment on दिल्लीमा परिक्षणका लागि पठाइएका सबै नमुना डेल्टा भेरियन्ट पुष्टि भएपछि मन्त्रालयले जारी गर्यो यस्तो विज्ञप्ती, मंगलवार कति थपिए नयाँ संक्रमित ?
काठमाडौ । नेपालमा परिक्षण नहुने भएकाले भारतमा परिक्षणका लागि पठाइएको नमुनाहरु सबैमा नयाँ भेरियन्ट पुष्टि भएको छ । भारतमा महामारीको रुप लिएको को रोनाको नयाँ भेरियन्ट नेपालमा पनि बढ्दो क्रममा छ । नेपालमा नयाँ भेरियन्टको परिक्षण गर्ने समेत ब्यवस्था छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भारतको नयाँदिल्ली पठाएका सबै ४७ वटा नमूनामा डेल्टा भेरियन्ट पुष्टि भएको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा। समिरकुमार अधिकारीले मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी सो कुराको पुष्टि गरेका हुन् । नयाँ भेरियन्ट खतरनाक तरिकाले फैलदै गएको तर्फ सचेत गराउँदै मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ । सूचनामा महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरको चुनौती देखिएकाले अधिकारीले सर्वसाधारणलाई तयारी गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपालमा हालसम्म अल्टा, डेल्टा र कप्पा भेरियन्ट पुष्टि भइसकेका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ८९९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । १२ हजार ६५५ पीसीआर परीक्षण गर्दा २ हजार ७२६ जना र ४ हजार ८६३ एन्टिजेन परीक्षण गर्दा १ हजार १७३ गरी ३ हजार ८९९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा संक्रमणबाट २० जनाको मृत्यु भएको छ भने १ हजार ७७८ जना निको भएका छन् । मंगलबार थपिएकासँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या ६ लाख ८५ हजार ५७३ पुगेको छ । तीमध्ये ९ हजार ७५८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ लाख ४७ हजार ७९ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या २८ हजार ८३६ जना रहेका छन् । जसमध्ये २५ हजार ९३८ जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने २ हजार ८९८ जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् । बिरामीमध्ये ६११ जना आईसीयू र १७१ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत् छन् ।
१० वर्ष मुनिका ७९ बालबालिकामा संक्रमण देखिएको छ भने ११ देखि २० वर्षम उमेर समूहका २५३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ट्रकको ट’क्कर’बाट मोटरसाइकलमा सवार २ जनाको मु’त्यु
काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर एनटिसी मोबाइलसेवा अवरुद्ध
June 23, 2021 खबर समृद्ध
रुपा सुनार प्रकरण : पूर्वमन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध अनुसन्धान अगाडि बढाउन सर्वोच्चको आदेश
July 15, 2021 July 15, 2021 खबर समृद्ध
गुल्मीको मुसिकोटमा आँखा उपचार केन्द्र प्रभावकारी बन्दै,आखाको सफल अप्रेसन गरेको अनुभव
November 3, 2021 खबर समृद्ध